Ajụjụ na Azịza: Mweghachi azụmaahịa azụmahịa | Martech Zone
N’afọ gara aga, ụzọ dị iche iche a na-ajụ ajụjụ na azịza siri malite ịntanetị Quora, Kwadoro, na Azịza LinkedIn. Echiche nke Q&A abụghị nke ọhụrụ, mana ngwa ahụ agbanweela site na isiokwu izugbe gaa na ngwa azụmahịa. Ndị egwuregwu izizi na mpaghara a, Azịza.com, Ask.com, Quora, wdg, ejiri ya maka ajụjụ izugbe dị ka "Gịnị bụ nsogbu nke ịgba lọtrị?" ma ghara ilekwasị anya na mmekọrịta mmekọrịta. Ngbanwe ohuru a, agbanyela na ebe obughi nani inweta ozi, ma mee ka ndi mmadu di nkpa ma nwekwuo mmuta banyere oru nke ulo oru.
Na mkpokọta, ọrụ Q&A agbanweela n'ụzọ atọ dị mkpa:
1. Social akụrụngwa
N'adịghị ka saịtị Q&A ndị mbụ, ngwa ọhụrụ ahụ na-enye ndị ọrụ ohere ijikọ ndị enyi ha, yana ndị ha anaghị amata, mana ha ga-achọ. Iji maa atụ, Apụrụ m ịhụ ajụjụ ndị mmadụ na-anaghị eso na Quora onye tinyere ajụjụ n’isiokwu m sochiri. Ihe ndi mmadu emeela ka ndi mmadu nwee mmeghachi omume nke obi n'ihi na ha na enye ha ohere ka ha na ndi ozo na emekorita, karia nani ichere azịza. Ọ dịka ndị mmadụ tụkwasikwara obi ike na azịza ha na saịtị ndị a n'ihi na anyị nwere ike ijikọ azịza ndị a na ihu na aha.
2. Otu & Isiokwu
Ike m na-achọ saịtị ndị a niile masịrị m, yana edemede na isiokwu ndị achọrọ. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ isiokwu na saịtị ndị a ịhọrọ, ndepụta gị nwere ike ịhazi isiokwu ndị ịchọrọ ịmatakwu banyere.
3. Imeghe & Nyocha
Ọ bụghị naanị na ndị mmadụ na-aza ajụjụ dị mkpa, mana ha na-enyekwa ozi nke a na-agaraghị enye afọ iri gara aga. Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịza ajụjụ, ha na-achọkwa ịba uru. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnọghị na saịtị ndị a, ị nwere ike nyocha ihe ụlọ ọrụ ahụ na-eme, ihe asọmpi gị na-ekwu, yana otu esi ahụta ya n'ahịa.
Ọ bụrụ na ịnọghị na netwọk ndị a, chee echiche banyere ya na n'oge na-adịghị anya.
Tags: akwụkwọ akaụlọ ọrụ egoibuụzọ